Igcine ukubuyekezwa: May. 21 2018 | 2 imiz ufunde
Uma kugcwele eside umqondo usuku lokuqala, zikhawu babe nezingxoxo ukuthi ayeke ngaphambi kokuba baqale akusho awuzizwa, ke cabangela uhlela usuku lokuqala ehlanganisa izinja zakho kanye nosuku yakho. Ukuletha izinja zakho kungagcina ithulisa sezimiso at bay futhi akunike kokubili i look at ngaphakathi ubuntu bakho. Kodwa lapho kufanele uya? Cabangela lezi inja-friendly date imibono ezinhlanu.
Dine at a restaurant inja-friendly: Ngayithatha sokudlela umqondo kahle-bakhathale for a date lokuqala. Ngakho kungani kungenjalo ukwengeza twist kulona udla esitolo sokudlela inja-friendly? Ukuze uthole restaurant inja-friendly endaweni yakho, sebenzisa search engine okuthandayo noma ucele ozithandayo inja Boutique esitolo sakho ngenxa tips.
Yiba khona i concert ongaphandle: Kungakhathaliseki ukuthi dancing to a cover band ukudlala hits of bands athandwayo noma ukulalela orchestra chamber ukudlala umculo classical, ehambele ikhonsathi ongaphandle ngosuku lokuqala kuyindlela omkhulu ukuze ihlanganise izinja zakho. Uma kwenzeka, ukuletha ubhasikidi epikinikini futhi zihlanganisa ezinye awukudla inja-friendly, too. Just qinisekisa okubanjelwe ekhonsathini ivumela izinja; ungafuni abafika pooches yakho kuphela ukuthola bengakwazi khona.
Hlola idolobha lakho ngezinyawo: Uma isimo sezulu evuma, ke cabangela umhlangano up with izinja zakho mlando ovelele futhi ukuhlola indawo. Ukuhamba kuyindlela ekhululekile ukuba azi nomunye uma nokunikeza izinja zakho ekusebenziseni kwawo. Ungakhohlwa izikhwama poop!
Hlangana at a park inja: Ukuze usuku lokuqala abayitoho futhi sisheshe, basikisela kokuhlangana izinja zakho at the wendawo inja park. Wena kanye nezinja zakho ungathola Ukuvivinya ngenkathi edlala umdlalo we catch. Ukuhlangana at the park inja egcina usuku lathambisa, too; uma hit it off, ungakwazi basikisela elibangise out for dinner, kodwa uma izinhlansi musa ncamashi fly, ungakwazi nje amabombo ekhaya. Gcina amanzi asemabhodleleni esandleni wena nenja yakho, futhi mhlawumbe abanye awukudla for izinja zakho. Ngaphambi ngiyothatha ukuthi abanjwe, noma, hlola kuqala ukuze sibone uma park inja kudinga ilayisensi ekhethekile noma tag, noma uma udinga ukukhokha imali kusengaphambili.
Yiba khona umtholampilo inja: Noma ngabe ikilasi tips on nokuzilungisa noma a isigaba imfanelo nenja yakho, ukuya emthola inja-egxile usuku yakho enhle kakhulu ukumazi nomunye esimweni esikhululekile futhi zikhululekile. Ukuze uthole umtholampilo inja endaweni yakho, ungaqala ngokubheka umpheme noma okukhethekile inja wendawo esitolo sakho.
Uma uhlela usuku lokuqala nothile obalulekile kanye nenja yabo, qinisekisa bazizwa bekhululeke ngokuletha Canine yabo kanye. Ezinye izinja kungenzeka kube ovumelana in izixuku noma nezinye izinja.